Waa maxay barbaarinta daweynta? | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 28/11/2021 20:37 | Tababar
Barbaarintu waa laan lagama maarmaan u ah dhinaca waxbarashada. Habka waxbarashadu waa shaqsi sababtoo ah arday kastaa wuxuu leeyahay hab u gaar ah. Waxaa muhiim ah in kor loo qaado fursadaha loo siman yahay ee dhanka waxbarashada si kor loogu qaado horumarka shakhsi ahaaneed ee bini'aadamka. Iyo barbaarinta daweynta fuliyaa hawl lama huraan ah. Kiiskan, Barbaarintu waxay hagtaa, taageertaa oo ay raacdaa carruurta iyo dhallinyarada qabta baahiyaha waxbarasho ee gaarka ah.
Sidan, barnaamijyada taageerada waxaa loo qaabeeyey kuwaas oo muujinaya faragelin gaar ah oo la socota ujeedooyinka dhabta ah. Yoolalka kor u qaadaya horumarinta madaxbannaanida iyo awoodaha shakhsi ahaaneed.
1 Maxay tahay barbaarinta daweynta?
2 Waa maxay hawlaha uu qabto barayaasha daweyntu?
Maxay tahay barbaarinta daweynta?
Shaqada machadka daawayntu waa xirfad. Xirfadlayaasha ugu fiican kaliya maaha kuwa haysta tababbarka awood u siinaya inay qabtaan jagooyin gaar ah. Xirfaddu waa fure si aad ugu raaxaysato shaqada la qabtay. Shaqo aad muhiim u ah marka laga eego dhanka aadanaha. Barayaasha daawayntu way ogyihiin waxa ay yihiin xaddidaadaha suurtagalka ah ee xaaladda qofka xawaarahaaga waxbarasho. Laakin sidoo kale wuu garanayaa meelaha uu ku wanaagsan yahay, wuxuuna ku xisaabtamaa awoodda qofka. Taasi waa, awoodaada inaad ku hormarto xaqiijinta yoolalka cusub.
Barashada daawayntu waa fududeeyaha waxbarashada. Waa xirfadle leh khibrad, karti, xirfad iyo karti uu ku taageero oo uu qof walba ku hago.
Qaar badan oo ka mid ah xirfadlayaasha horumariya shaqadooda goobtan waxay dhammeeyaan shahaadada mastarka taasoo u guntaday waxbarashada daweynta oo ah shayga ugu muhiimsan ee daraasadda. Dejinta qorshayaasha ku habboon baahiyaha gaarka ah ee ardayda Waa in ay mar walba ka bilaabataa aqoonta xaqiiqadeeda. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la sameeyo ogaanshaha xaaladda si loo horumariyo habab kala duwan oo wax qabad oo waxtar leh. Barashada daawaynta waxay leedahay baaxad adeegsi dhinacyo kala duwan ah.
Waa maxay hawlaha uu qabto barayaasha daweyntu?
Tusaale ahaan, barashada qoraalka iyo akhriska. Laba ka mid ah aqoonta ugu muhiimsan ee uu aadamuhu kasbado yaraantiisa. Dhab ahaantii, awoodda akhriska iyo fahamka qoraalka, iyo sidoo kale in lagu qoro nuxurka warqad, waxay kor u qaadaysaa fulinta ujeedooyinka kale. Laakin akhrinta iyo qorista waa laba nooc oo barasho oo aan raacin qaafiyad toosan xaalad kasta. Qof kastaa wuxuu leeyahay hab ay tahay inuu u maro si uu u helo hanti badan oo eray bixin ah, xoojinta fahamka akhriska ama ku celcelinta qorista.
Sida aan soo sheegnay, barbaarinta daweyntu waxay qabataa shaqo aad muhiim u ah marka loo eego aragtida aadanaha. Oo waxaa jira arrimo ku lug leh dabeecadda aadanaha oo sidoo kale noqday diiradda edbintan. Waa in lagu xisaabtamo in bini'aadamku yahay bulsho bulsheed, sidaas awgeed, xiriirka dadka kale waa farxad. Haddana waxa laga yaabaa in qofku uu la kulmo caqabado iyo dhibaatooyin xagga xidhiidhka, maamulka dareenka, ama xirfadaha bulsho. Barashada daweynta sidoo kale waxay bixisaa qalab waxtar leh si kor loogu qaado cilaaqaadka dadka dhexdooda.
Barashada daawaynta ayaa lama huraan u ah qaabaynta ficilada daryeelka hore. Anshaxan ayaa lama huraan u ah dhanka waxbarashada. Iyo sidoo kale matoorka taageerada qoysaska kuwaas oo inta badan dareema niyad-jabka marka ay qabaan su'aalo aysan u heli karin jawaab cad. In sidan, Macalimiinta, qoysaska iyo barbaariyayaasha waxay u shaqayn karaan koox ahaan si loo daboolo baahiyaha ilmaha.
Ficilada faragelinta ee diiradda saaraya ka qaybgalka baahiyaha waxbarasho ee gaarka ah waxay sidoo kale xoojiyaan isku-kalsoonaanta ardayda. Ardayda ka gudubta caqabadaha cusub oo khibrad u leh ku qanacsanaanta ujeedooyinka la gaaray waqti ka dib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Tababar » Waa maxay barbaarinta daweynta?
Maxay yihiin mucaaradku?